Mbupụta: Akụkọ nke Successga nke Ọma | Martech Zone
Ka m na-eche nke m ụgbọ elu ụnyaahụ, Echetara m ihe abụọ ahụ m chefuru - jaket egwuregwu m na otu n'ime akwụkwọ dị na m na-agụ ikpo.
Luckily, ụlọ ahịa ahụ n'ọnụ ụzọ m nwere ezi uche akwụkwọ nhọrọ na N'èzí: Akụkọ nke Successga nke Ọma, site Malcolm Gladwell, nọ n'ebe ahụ. Abụwo m onye na-akwado Malcolm Gladwell nke ọma - ma na New Yorker na akwụkwọ ya. Gbanye Gladwell, Companylọ Ọrụ Ọsọ dere, sị:
Onwebeghi onye chetara n’oge na-adịghị anya banye n’ọrụ onye ndu echiche azụmaahịa dịka amara ma ọ bụ mmetụta dị ka Gladwell. N'oge na-adịghị anya mgbe akwụkwọ mbụ ya gasịrị, The Tipping Point: Otu obere ihe nwere ike isi mee nnukwu ihe dị iche (Little, Brown, 2000), dabara na nkwụ America, Gladwell mere ntopute ahụ site n'aka onye ọdee akwụkwọ izugbe na The New Yorker maka ire ahịa chi.
Agbanyeghị abụghị maka ịzụ ahịa. Ọ bụ maka ịga nke ọma. Malcolm Gladwell bụ onye edemede akụkọ ịtụnanya - ọ na - ekenyekwa ụfọdụ ịtụnanya, pụrụ iche, akụkọ banyere ụfọdụ adịghị mma n’akụkọ ihe mere eme nke ndị meriri. Akwụkwọ ahụ na-arụtụ aka na ọnọdụ ebe ọnọdụ dị n'usoro zuru oke maka ọganiihu, na-ajụ ọdịmma dị na ya, ma na-akwado ịrụsi ọrụ ike - kpọmkwem - ọtụtụ (10,000) awa nwere ike iduga ọtụtụ mmadụ ịmara.
Fọdụ n'ime akụkọ pụrụ iche… gịnị kpatara ejiri bụrụ ndị egwuregwu hockey a mụrụ nke ukwuu na ọnwa mbụ n'afọ? Gịnị mere ndị Asia ji dị ukwuu na mgbakọ na mwepụ? Kedu ka IQ si metụta ihe ịga nke ọma? Gini mere ndi Southerners ji agha ogu? Kedụ ka agbụrụ agbụrụ si rụọ nnukwu ọrụ n'ụgbọelu ụgbọ elu Korea ọtụtụ afọ gara aga? Kedụ ka usoro akwụkwọ ụlọ akwụkwọ ugbu a si agbanwe ohere ụmụ anyị inwe ihe ịga nke ọma?
Omume nke akwukwo bu ezigbo. Anyị nwere ike na-emetụta ọganiihu ndị mmadụ site na ịgbanwe gburugburu ebe ha bi, ọrụ na egwuregwu. Gladwell na-enye ezinụlọ nke ya dị ka ezigbo ihe atụ… na-ekwu okwu banyere àjà ndị mmadụ n'otu n'otu na ndụ ezinụlọ ya nyere aka wee gbanwee ọdịnihu na ihe ịga nke ọma nke Gladwell n'onwe ya.
M hụrụ n'anya akwụkwọ na-agbagha mgbagha na ọnọdụ quo. Nke a bụ ọkacha mmasị m Gladwell ibe. Emebisiri m akwukwo a ma achoro m ichota ihe m guru na uzo!
Tags: Firegba egbeCapsule CRMNweta SMScms iphone ngwaọchụchọ mba ụwangwa iphone
Mee 4, 2009 na 5: 22 PM
Ọ dị ka ọ mụtara ihe nzuzo iji jide mmasị gị-kọọ ezigbo akụkọ. Daalụ maka nyocha.
Mee 4, 2009 na 7: 47 PM
Nke a bụ otu ọkacha mmasị m akwụkwọ Malcom Gladwell. Magburu onwe stof!
Mee 5, 2009 na 8: 50 AM
Obi dị m ezigbo ụtọ na Outliers. Isi akwụkwọ a bụ na ọ bụghị naanị mgbalị naanị na-eme ka mmadụ nwee ihe ịga nke ọma n'ụzọ dị ịtụnanya, mana ọtụtụ oge ọ bụ nkwenye nke ọnọdụ ziri ezi na oge ga-abụ akụkụ nke nha ahụ. Agbanyeghị, achọpụtara m na m na-eche na akụkụ nke ihe Gladwell na-eme bụ idepụta ihe atụ nke ọbụbụeze Chineke na otu aka Ya a na-adịghị ahụ anya si arụ ọrụ na ihe omume nke ụwa a. Akwụkwọ Nsọ na-ekwu maka otu Ọ [Chineke] si eme ka eze na alaeze dị elu ma kwatuo ma anyị amataghị usoro ihe omume rue oge ahụ.
N'ihe ederede bara uru karị, ọ na-eme ka m chee echiche banyere mgbe ọdụdụ nwa m kwesịrị ịmalite ụlọ akwụkwọ. 😉
Mee 5, 2009 na 11: 16 AM
Chaị - Curt! Ee, ọ dị mfe ichefu na 'anyị anaghị elekọta'. Ọ Bth na m nwere ikike nke nnwere onwe ime nhọrọ, echere m na Chineke na-enye anyị ohere kwa ụbọchị iji nyere ndị gbara anyị gburugburu aka. Anyị bụụrụ otu n’ime ọnọdụ ndị nwere ike iduga ndị ọzọ na ihe ịga nke ọma. Ajụjụ bụ ma anyị anaghị emepe onwe anyị iji nyere ibe anyị aka ime nke ọma.
Mee 6, 2009 na 8: 43 AM
Ozo gi bu enyi m. E kwuwerị, a zọpụtara anyị ọ bụghị naanị n'ihi na Chineke hụrụ anyị n'anya, mana ịrụ ezi ọrụ na nsọpụrụ na obi ekele nye Ya.
Ihe ọzọ na-abata m n’uche bụ na ndụ ga-aga nke ọma, dịka ụwa siri tụọ, nwere ike ọgaghị enwe ihe ịga nke ọma n’ezie. E kwuwerị, enweghị igbe ọ bụla na-ebu akpa. 🙂
Lezie, enyi m.
Mee 7, 2009 na 12: 19 AM
Ahụrụ m akwụkwọ a n'anya. Karịsịa ebe ọ bụ na nwa m nwoke nke okenye na-egwu bọl ma na-anọdụ naanị ụbọchị 15 gafere ụbọchị nkwụsị ahụ na-eme ka ọ bụrụ otu n'ime ndị egwuregwu kacha ochie na otu egwuregwu ọ bụla ọ na-egwu.
Aug 24, 2009 na 3:53 PM
Agụọla m nchịkọta nke akwụkwọ a. Anya nke ukwuu na-akpali. Wee nweta otu ya. Daalụ maka ịkekọrịta ya.